iOS 6~6.1 Untethered Jailbreak လုပ်ပြီးထားသော iDevices တွင် Cracked app များသွင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်း (၂) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
JAS 5s (မြန်မာဖုန်း) ထွက်ရှိ V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာ Mobile Guide ဂျာနယ် အတွဲ (2) အမှတ် (3) Huawei U8815(G300) root ဖောက်ခြင်း အပြည့်အစုံ (baseband 109808) Themes Collection For Windows7and 8 Home
Published On: Tue, Feb 5th, 2013 iOS tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By ဖန်လုံး iOS 6~6.1 Untethered Jailbreak လုပ်ပြီးထားသော iDevices တွင် Cracked app များသွင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်း (၂)
jailbreak လုပ်ပြီးသား ios6 idevice များအနေနဲ့ Crack app/ Game တွေကို install လုပ်ဖို့idevice မှာ Appsync ios6 ကို install လုပ်ထားရပါ့မယ်.
Appsync for ios6ကို ifunbox နှင့်သူငယ်ချင်းတို့idevice များအတွင်းသို့install လုပ်ပုံကို တင်ပေးတာပါ.ဒီနည်းလေးနဲ့ အားလုံးအစဉ်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.
ifunbox မရှိသူများက ဒီ link လေးမှ down ယူနိုင်ပါတယ်.
Appsync for ios6 ကို device အတွင်းသို့install လုပ်ဖို့ 
Appsync.dylib ကို download ရယူပေးပါ.
(Appsync for ios6 -2)
၂ အနေနဲ့ Raw File System ကနေပြီး Library သို့ သွားပေးပါ.
၃ အနေနဲ့ Library အတွင်းမှ MobileSubstrate သို့ သွားပေးပါ.
၄ အနေနဲ့ Library > MobileSubstrate >DynamicLibraries သို့ သွားပေးပါ
၅ အနေနဲ့ Library> MobileSubstrate>DynamicLibraries အတွင်းသို့download ရယူပြီးထားသော Appsync.dylib.Appsync.plist ကိုဆွဲယူပြီး device အတွင်းသို့INSTALL လုပ်ပေးပါ. အားလုံးပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ device ကို power on/off ပြုလုပ်ပေးပါ. crack app / Game တွေကိုinstall လုပ်လို့ ရပြီပေါ့.
ဖန်လုံး - Related News
V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာ
Huawei U8815(G300) root ဖောက်ခြင်း အပြည့်အစုံ (baseband 109808)
Y200 (U8655) root လုပ်နည်း
Sony Xperia SP ကို JellyBean (Android V4.1.2) တင်၍ Root လုပ်နည်း
3 comments on “iOS 6~6.1 Untethered Jailbreak လုပ်ပြီးထားသော iDevices တွင် Cracked app များသွင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်း (၂)”	Nyi htut on March 5, 2013 at 6:36 pm said:
အခွေးထဲကနေ install. လုပ်ရင် တချို့game. တွေက. ဖွင့်ိုံ့ မရဘူး. ပြိ်ပြန်ပိတ်သွားတယ်. ဘာလို့ လဲပြောပြပေးပါ
Reply ↓	Ko Myo on March 22, 2013 at 1:49 pm said:
ကျနော်အိုင်ဖုံး(၅)ကိုသုံးပါတယ် ကျနော် မြန်မာဖေါင့်ကိုတင်လို့မတတ်ပါ ကျနော်နေတဲ့ နေရာမှာက ဘယ်ဆိုင်ကမှလဲတင်လို့ မတတ်ပါ အဲ့ဒါတင်ခြင်လို့ ပြောပြပေးလို့ရမယ်ဆိုင်ရင်တော့ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တခုက ဘီဘီစီကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်လဲ Flash player ကိုတောင်းတယ် ကျနော်လဲဘယ်မှာသွင်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်တယ်မရပါ အဲ့သည်(၂) ခုလုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ကျနော့အတွက်အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ
Reply ↓	solo on May 1, 2013 at 2:03 am said:
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့ Ipad 2ထဲမှာ MobileSubstrate file မပါပါဘူးခင်ဗျ။အဲဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးခင်ဗျ။
tinko on Next Launcher 3D v1.31 for android(latest version)hninyu on SketchBook Pro v2.8.1 for iPadhninyu on Magic Piano for iphone/ipadThi Ha Aung on Bluestacks App Player offline Installer For Windows XP/7123 on V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာ Android Development